Konke mayelana nekati leBangali | Amakati kaNoti
Ikati laseBengal noma ikati laseBengali linoboya obumangalisayo. Ukubukeka kwaso kusikhumbuza kakhulu ingwe; Kodwa-ke, akumele sikhohliswe ukubukeka kwakhe, ngoba unobuntu bekati elifuywayo nelithandekayo.
Uhlobo oluthile olusha, kepha luya ngokuya luthandwa kakhulu. Futhi kungukuthi, ngubani ongafuni ukuba nengwe encane ekhaya? Ake sifunde kabanzi ngaye.
1 Umlando wekati waseBangali
2.1 Ikati elimhlophe le-bengal
3 Ikati laseBangal noma iBangali lingaphila iminyaka emingaki?
4 Unjani umlingiswa?
5 Ungayinakekela kanjani ikati le-Bengal noma le-Bengali?
6 Libiza malini ikati le-bengal?
Umlando wekati waseBangali
Leli kati elihle kwavela njengesiphambano phakathi kwamakati afuywayo nawasendle, selokhu yaqala njengengxube yekati lezingwe lase-Asia (I-Prionailurus bengalensis) kanye nezinye izinhlobo zamakati ezifuywayo: I-Ocicat, Abyssinian, IBritish Shorthair futhi Mau waseGibhithe. Ngakho-ke bekunokwenzeka ukuthi ube nesibaya esibukeka sasendle, kepha ngesimilo esithobekile nesinothando.
Ngawo-40 kwase kunamakati aseBengal eJapan, kepha lolu hlobo aluzange lube khona kuze kube yiminyaka engama-20 kuya kwengama-30 kamuva, e-United States, lapho baqala ukukhonjiswa khona ngonyaka we-1985. i-International Cat Association (ICA).
Ngaphandle kwalokhu, kukhona izinhlangano, njengeCFA, ezingazange zikwamukele njengohlobo ngoba zingayemukeli inzalo. AmaBangalis esizukulwane sesine kuphela angabamba iqhaza emibonisweni yawo ngenhloso yokwenza izakhi zofuzo zasendle zihlanjululwe. Kepha iqiniso ukuthi kukhona abafuyi abaqhubeka nokukhetha ama-specimens bese beweqa ukwenza ngcono uhlobo; futhi empeleni namuhla akusadingeki ukuwela amakati engwe namakati asekhaya.
Ikati eli-bengal kusofa
Ikati leBangali Kuyisilwane esikhulu, esinesisindo esifinyelela ku-9kg uma owesilisa, aze afike ku-4kg kwesifazane. Umzimba uqine kakhulu futhi unemisipha, uvikelwe ngezinwele ezimfishane, ezithambile, eziwugqinsi. Ikhanda libanzi, liyindilinga, linamehlo aluhlaza okotshani, izindlebe ezincane nomsila ojiyile, onosayizi ophakathi nendawo.
Ngokwesilinganiso, kuphoqelekile ukuba nethiphu yomsila omnyama, isisu esinezintambo kanye nezindlela zokuhambaIbhantshi liyi-brindle kuphela, futhi umbala wesisekelo kungaba ukhilimu, igolide, i-orange, izimpondo zendlovu, ophuzi noma omhlophe.
Ikati elimhlophe le-bengal
Isithombe - Amolife.com
Uwakhumbula kakhulu amahlosi ama-albino, akunjalo? Lokho kubukeka kwesibindi, leso simo sengqondo sokuzanelisa asisebenzisayo ngenkathi egcotshwa ilanga ... Ikati elimhlophe le-bengal liyisilwane esihle ngokushesha uzoba umngani omkhulu womndeni wonke. Vele, kufanele wazi ukuthi ukuba mhlophe kufanele ugweme ukuvezwa yinkosi yelanga isikhathi eside kakhulu, ngoba uma kungenjalo ngokuhamba kwesikhathi ungaba nomdlavuza wesikhumba.
Ikati laseBangal noma iBangali lingaphila iminyaka emingaki?
Inqobo nje uma uthola ukunakekelwa okufanele, ingaphila iminyaka eyi-9 nengu-15 ngokuphelele. Vele, kufanele ahlale ngaphakathi endlini, ngoba uma simkhipha, isikhathi sakhe sokuphila cishe sizoncishiswa.
Ikati laseBangali liyikati elikhetheke kakhulu. Uhlakaniphe kakhulu, unothando futhi ukhuthele kakhulu. Uthanda ukudlala, ukuhlola, ukufunda izinto ezintsha, nokuba nomndeni wakhe.. Ngaphezu kwalokho, ngesinye sezilwane esakha ubudlelwano obuqinile nomuntu oyedwa, yize kufika ekuthandeni bonke abantu abasendlini.
Uyakujabulela ukugxuma, ukugibela futhi, yize kubukeka kungajwayelekile, ukubhukuda, into akwaziyo ukuthi angayenza kanjani kahle kakhulu ngoba iyikhwalithi ayizuze njengekati lekati lase-Asia, okumele lizingele inyamazane yalo emaxhaphozini.
Ungayinakekela kanjani ikati le-Bengal noma le-Bengali?
Uma uthatha isinqumo sokuhlala nekati le-Bengal, kufanele unikeze lokhu kunakekelwa okulandelayo:
Uma kungenzeka, kunconywa kakhulu ukunikeza ukudla kwemveloKuphakathi kokuthi Yum Ukudla Kwamakati, noma iBarf (ngosizo lwe-feline nutritionist). Ukudla ozokubekezelela kangcono futhi okuzoletha izinzuzo eziningi, okuyinhloko okulandelayo:
Amazinyo aqinile, anempilo futhi ahlanzekile
Ukukhula okuhle nentuthuko
Endabeni yokungakwazi ukukhetha lolu hlobo lokudla, okunye okuhle kakhulu ukunikeza okuphakelayo okungaqukethe okusanhlamvu noma okwenziwe ngemikhiqizo, njenge-Applaws, i-Orijen, i-Taste of the Wild, phakathi kokunye ngoba lokhu ngeke kukudale inkinga. Vele, kufanele wazi ukuthi isikhwama se-7kg siyabiza: singabiza kalula ama-euro angama-40, kepha inani okufanele linikezwe liphansi kakhulu kunalokho uma linikezwe ukudla okuphansi ngoba liqukethe amaprotheni ezilwane amaningi kakhulu.
Ikati laseBangali liyikati elisebenza ngokukhethekile. Idinga ukudlalwa nsuku zonke, izikhathi eziningana. Izikhathi ezintathu noma ezine ezihlala imizuzu eyi-10-15 zizokugcina usesimweni, futhi uzoba nokuzola nokujabula okukhulu.
Kungaba nokuthakazelisa kakhulu ukumfundisa ukuhamba naye amahanisi. Uma ungazi ukuthi ungakwenza kanjani, ungakhathazeki. Vuliwe Lesi sihloko Siyakuchazela.
Izinwele kufanele ibhulashiwe kanye ngosuku ngekhadi noma ikama ukuze kususwe uboya obufile. Akudingekile ukuyigeza. Ngesikhathi sonyaka we-molting kungakuhle ukuthi unikeze Malta ukuvimbela izinwele eziningi kakhulu ekuqongeleleni esiswini sakho.
Amehlo angahlanzwa njalo ezinsukwini eziyi-3-4 kusetshenziswa i-gauze ehlanzekile (eyodwa ngeso ngalinye) ehlanganiswe ukumnika kwe-chamomile.
Izindlebe kufanele zihlanzwe kanye ngesonto nge-gauze ehlanzekile nokwehla kwamehlo okunikezwe udokotela. Kufanele ungeze amaconsi angu-1-2 bese uhlanza ingxenye engaphandle yendlebe ngayinye nge-gauze.
Njenganoma iyiphi enye ikati, phakathi nonyaka wokuqala wokuphila kuzodingeka ukuthi umyise kudokotela wezilwane ukuze ubeke i imigomo edingekayo futhi neutering noma ukumchitha uma ungahlosile ukuyizala.
Kusukela onyakeni kuya phambili futhi minyaka yonke, kunconywa kakhulu ukuthi ubuyise emuva ukuthola ama-booster shots bese uyihlola ukuthola noma yiziphi izinkinga ezingaba khona.
Ngaphezu kwalokho, ngaso sonke isikhathi uma usola ukuthi uyagula, kuzofanele ubonane nodokotela ozokwelapha.
Libiza malini ikati le-bengal?
Uma ufuna ngempela ukuhlala nekati laseBangali, futhi ucabanga ukuthi ukulungele ukunikeza konke ukunakekelwa elizokudinga kukho konke ukuphila kwalo, kufanele ucabange ukuthi umdlwane uyabiza cishe ama-euro angama-1500 ithengwe endaweni yokuchamisela amazinyane.
Siyazi ukuthi uyayithanda, ngakho-ke ake siqede le ndatshana ngokunamathisela igalari yezithombe yekati laseBangali noma iBengal:
Indlela ephelele ye-athikili: Amakati kaNoti » Izinhlobo » Ikati laseBangali, uboya obunokubukeka kwasendle nenhliziyo enkulu
Mangaki amabhithi ngomzuzu ajwayelekile ekati?